Ukusimama - Foton Motor Group Co., Ltd.
I-FOTON ithokozela iziqu zebhizinisi lokuqala lezimoto eChina elenza i-R & D yebhasi enikwe amandla aluhlaza, umkhiqizi wokuqala webhasi onikwe amandla yi-hydrogen fuel kanye nezimoto zebhizinisi ezinama-mileage wokusebenza omude kunayo yonke yemoto eyodwa emhlabeni.
IMIKHIQIZO ENTSHA YAMANDLA
Lonke uchungechunge lwezimoto zentengiso, kufaka phakathi imoto yomgibeli, ibhasi, iloli kanye ne-SPV. Amabhasi e-AUV asukela ku-5.9m kuya ku-18m ayizisombululo eziphephile, ezinokwethenjelwa futhi eziluhlaza ezokuthutha abagibeli, ukuhamba nokuvakasha. Ukuthengiswa kwezimoto eziluhlaza kubeke indawo yokuqala embonini iminyaka elandelanayo. NgoMeyi 2016, i-FOTON yawina i-oda lamabhasi ayi-100 anikwa amandla yi-hydrogen fuel cell, okumaningi kakhulu emhlabeni.
ITEKNOLOJI ENTSHA YAMANDLA
I-FOTON iyakwazi ukwenza i-R & D kwezingu-8 zobuchwepheshe obuyisisekelo bemoto yamandla emisha kufaka phakathi ukuhlanganiswa kwe-powertrain, ukupakisha ibhethri, isilawuli sezimoto kanye nesoftware yokulawula izimoto futhi ifake isicelo samalungelo obunikazi ahlobene ne-1,032 futhi iphethe ubuchwepheshe obungaphezulu kwama-70% obunikazi. I-FOTON ithuthukise ngempumelelo isilawuli sezimoto ezingama-32-bit, uhlelo lokuphathwa kwebhethri kanye nohlelo lokulawulwa kwezimoto, okusetshenziswe emikhiqizweni eyahlukahlukene kubandakanya izimoto zamandla ezintsha nezokuthutha. Iminyaka engu-R & D ezimele inika amandla i-FOTON ukuba nobunikazi bobuchwepheshe obuyisisekelo bohlelo lwebhethri, lwemoto nolwe-elekthronikhi ukuhlangabezana nezidingo ekusheshiseni, ekukhuphukeni, ekuhambeni ngezikebhe nokushaja isikhathi.
I-FOTON itshale imali engaphezu kwe-RMB 23 billion futhi yakha izitshalo zesimanje ezisezingeni lomhlaba nolayini bokukhiqiza okuzenzakalelayo iminyaka engu-4 ngokususelwa kumqondo wokukhishwa kwe-zero, akukho ukuxhumana nokuzenzakalela ngokuthuthukisa ubuchwepheshe bokungenisa obuzenzakalelayo, obudijithali nobunobuhlakani.
Imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo
Umugqa wokumboza iRobot
Ulayini wokukhiqiza ibhasi we-13.7m
Okuzenzakalelayo Welding umugqa
Umugqa womhlangano weRobot